Ipharamitha yobuchwepheshe be-Hydraulic press brake nge-E21 125T / 2500 mm
Wonke umshini ungaphakathi kweshidi leshidi elibunjiwe, lonke uhlaka olushiselwe, ngokuxineka kwangaphakathi okuqedwe ngobuchwepheshe bokudlidliza kokuguga, amandla aphezulu nokuqina okuhle komshini. Isilinda samafutha ka-hydraulic esimbili sisetshenziselwa ukudlulisela okuphezulu, okunikezwe umkhawulo wokumisa umkhawulo kanye ne-torsion bar evumelanayo, ejwayelekile yokusebenza okuzinzile nokunokwethenjelwa, kanye nokunemba okuphezulu.
• Wonke umshini ungaphakathi kweshidi leshidi elibunjiwe, lonke uhlaka olushiselwe, ngokuxineka kwangaphakathi okuqedwe ngobuchwepheshe bokudlidliza kokuguga, amandla aphezulu nokuqina okuhle komshini.
• Isilinda samafutha ka-hydraulic esimbili sisetshenziselwa ukudlulisela okuphezulu, okunikezwe umkhawulo wokumisa umkhawulo kanye ne-torsion bar evumelanayo, ejwayelekile yokusebenza okuzinzile nokunokwethenjelwa, kanye nokunemba okuphezulu.
• Ukulawulwa kukagesi kanye nemodi yokuhleleka kahle yamukelwa ibanga lesitobha sangemuva nokushaywa kwe-bliding block, futhi kufakwe idivaysi yokubonisa yedijithali, elula futhi esheshayo esetshenziswayo.
• Idivaysi yokulungisa ukushaywa kwe-slider nedivayisi ye-gauge yangemuva: ukulungiswa okusheshayo kagesi, ukulungisa okuncane kwe-manual, ukubonisa kwedijithali, kulula futhi kuyashesha ukusetshenziswa.
• Umshini une-intshi, eyodwa, imodi eqhubekayo ebekiwe, ukuguquguquka, isikhathi sokuhlala kungalawulwa ngokudluliswa kwesikhathi.
• Izinsimbi zokuphepha, i-open-door device -off device.
• Umshini we-motor synchrony torsion, ukugcina ukunyakaza kwesilinganiso sokunxele.
• Isakhiwo sesinxephezelo semishini esinqunyelwe.
• Japan NOK yasekuqaleni amazwe master isilinda izimpawu.
Izinsiza kusebenza ezijwayelekile
Amazinga Wokuphepha (2006/42 / EC):
4.Front umunwe Ukuvikelwa (Ukuphepha ikhethini ukukhanya)
5. ISouth Korea Kacon Foot switch (Izinga 4 lokuphepha)
6.Back metal ephephile kocingo nge-CE ejwayelekile
Uhlelo lwe-Hydraulic luvela eBosch -Rexroth, eJalimane.
Lapho uwoyela uphuma empompa, yonke indlela eya kusilinda yengcindezi icindezela kuqala into eshidi, bese enye indlela yokudlulisa isikhathi ilawula ukubambezeleka kokungena egumbini eliphezulu lesilinda elingakwesokunxele cishe imizuzwana emi-2. Amafutha asesilinda esingezansi sesilinda yangakwesobunxele ayaphoqelelwa ukuba angene ekamelweni eliphezulu lesilinda eliphezulu nasekamelweni elincane elingaphansi lesilinda. Amafutha abuyele ethangini. I-stroke ebuyayo iguqulwa yi-valve ye-solenoid
Isilawuli se-Estun E21
• Izinombolo, uhlelo lwekhasi elilodwa
• Iphaneli yebhokisi le-Monochrome LCD.
• Ukudluliswa kwesikhathi kwangaphakathi
• Isitoko esiphikisayo
Isitayela 125T / 2500 mm
Bend max ubude ipuleti mm
Amapali ibanga mm
Isiliphu unhlangothi mm
Ubukhulu bokuvula okuphezulu mm
Ukujula komqala mm
Ithebula Ububanzi mm
Ukusebenza Ukuphakama mm
X eksisi Ijubane mm / s
Isivinini sokusebenza mm / s
Isivinini sokubuyisa mm / s
I-220V / 380V 50HZ 3P
SKF, NSK, FAG noma INA
Front Futhi Emuva Protection Fence
Langaphambilini isivinini esiphakathi umshini wokusika ucingo we-EDM
Olandelayo: Ipharamitha yobuchwepheshe yomshini wokugunda we-Hydraulic 6x3200MM nge-E21
Umfutholuketshezi cindezela ukubopha
I-ELECTROHYDRAULIC SERVO CNC PRESS BRAKE
IHYDRAULIC NC PRESS BRAKE
Umshini Wokugaya we-Gantry Surface, Umshini Wokugaya we-Gantry Single-End Surface, Umshini Wokugaya we-Gantry Double Head Surface, Umshini Wokugaya we-Gantry Double-End Surface, Umshini Wokugaya we-Gantry Single Head Surface, Uhlobo lwe-Gantry Surface Grinding Machine,